warkii.com » XOG: Rikoodhka Koobabka La Liga Ee Ay Ku Guuleysatay Real Madrid, Inta Ay Qaaday Barcelona Iyo Zidane Oo 19 Kulan Kasta Koob Qaaday
XOG: Rikoodhka Koobabka La Liga Ee Ay Ku Guuleysatay Real Madrid, Inta Ay Qaaday Barcelona Iyo Zidane Oo 19 Kulan Kasta Koob Qaaday
Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobkeedii 34aad ee horyaalka La Liga, waa kooxda ugu guulaha badan taariikhda kubada cagta Spain mana jirto koox u soo dhow xitaa kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona.
Los Blancos ayaa u baahneyd ka hor kulankii xalay labo dhibcood, laakiin waxay heleen seddex dhibcood ka dib markii ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal halka kooxdii la tartameyso ee Barcelona ay ku kuftaty garoonkeeda Camp Nou iyadoo ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay Osasuna.
Los Blancos ayaa sii dheereysatay rikoodhkeeda koobabka ugu badan ee horyaalka La Liga iyagoo haatan ku guuleystay 34 koob, kooxda ku soo xigta waa Barcelona oo ku guuleysatay 26 koob.
Waxay taasi la micno tahay in Los Blancos ay 8 koob oo horyaalka La Liga ah ay dheer tahay kooxda Barcelona. Kooxda seddexaad ee ugu guulaha badan horyaalka La Liga waa Atletico Madrid waxay ku guuleysatay kaliya 10 koob.
LIISKA KOOXAHA UGU KOOBABKA BADAN LA LIGA:
34 koob – Real Madrid
26 koob – Barcelona
10 koob – Atletico Madrid
8 koob – Athletic Club
6 koob – Valencia
2 koob – Real Sociedad
1 koob – Deportivo La Coruna, Sevilla, Real Betis
Dhanka kale tababare Zinedine Zidane ayaa ku guuleystay koobkiisii labaad ee horyaalka La Liga isagoo tababare u ah Real Madrid.
Waa koobkii 11aad ee uu qaado 209 kulan uu tababare u ahaa Los Blancos, intii garaneysa xisaabta celceliska waxay taasi u dhigantaa inuu 19 kulan kasta uu koob ku guuleystay.